काठ जलेको फायरप्लेस स्थापित गर्नु भन्दा पहिले तपाईंले जान्नुपर्ने केही चीजहरू - समाचार - निing्गो डिंगु टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।
केही चीजहरू तपाईलाई थाहा पाउनु पर्छ काठ दाउराको फायरप्लेस स्थापना गर्नु अघि
१. स्थापना पेशेवरहरूले गरेको हुनुपर्दछ
फायरप्लेस स्थापना गर्नु धेरै पेशागत काम हो र पेशेवरहरूले चलाउनु पर्छ। किनभने काठ जलेको वास्तविक आगो फायरप्लेसहरू स्थापनाको लागि अग्नि-ज्ञानको श्रृंखला समावेश छ र सुरक्षा प्रमाणीकरणको साथ विशेष चिमनी कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ, यसमा व्यावसायिकता र सुरक्षाको लागि उच्च आवश्यकताहरू छन्। पेशेवरहरूको द्वारा स्थापित गरिएको छैनको फायरप्लेसहरूको लागि, बीमा कम्पनीहरूले घर दिदैनन्। बीमा
२. स्थापना अवस्थाहरू जुन पूरा गर्नुपर्दछ
स्थापना कोठा प्रकार: सामान्यतया केवल भिला, स्वनिर्मित घरहरू र पाइन्टहाउसहरूको लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ।
चिम्नीको साथ: चिमनी र स्वयं-निर्मित घरहरू भएका विलाहरूका लागि, प्रायः चिम्नीलाई केवल 3-4- meters मिटर मात्र आवश्यक हुन्छ, र त्यसपछि चिमनीलाई चिम्नीमा लैजान सकिन्छ।
चिमनी बिना: यदि तपाईं चिमनी बिना घरमा काठ जलाउने फायरप्लेस स्थापित गर्नुहुन्छ, तपाईं धुम्रपान पाइपको प्रयोग निकास ग्यास उत्सर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। विशिष्टता यस प्रकार छ: meters मिटर â ‰ the धुवाँ पाइपको उचाई â ¤ ¤ १ meters मिटर, अर्थात् धुवाँ पाइपको उचाई meters मिटर भन्दा कम हुनु हुँदैन। अधिकतम लम्बाई १ meters मिटर भन्दा बढि हुनु हुँदैन, र उच्चतम बिन्दु १ मिटरले छत भन्दा बढि हुनु पर्छ।
आधार र भित्ता प्वालहरू रिजर्व गर्नुहोस्: काठ जलेको फायरप्लेस स्थापित गर्न सकिन्छ जब मेसन साइटमा प्रवेश गर्छन्। जब पाइपलाइनलाई बाहिरी भित्तामा जान आवश्यक हुन्छ, स्थापनाको लागि बाहिरी भित्ता इस्पात फ्रेम उधारो लिनु उत्तम हुन्छ। स्थापनाको बखत, भित्ता निर्माण गर्न र भित्ताबाट बाहिर निस्कन धुवाँ पाइपको लागि प्वाल सुरक्षित गर्नु आवश्यक छ (सामान्यतया १ 160० मिमी व्यासको व्यास भएको गोलो प्वाल)।
फायरप्रुफ सजावट सामग्री: फायरप्लेसको वरिपरि फायरप्लेस फ्रेम वा फायरप्लेस कल्चरको पर्खाल बनाउँदा, कृपया फायरप्रुफ सामग्रीहरू, जस्तै संगमरमर, सांस्कृतिक ढु ,्गा, अपवर्तक इँट, उच्च-तापक्रम सिमेन्ट इत्यादि संग सजावटमा ध्यान दिनुहोस् र फायरप्लेस शरीरलाई सजाउनको लागि र धुम्रपान पाइपहरू। यदि धुवाँ पाइप छतमा जान्छ भने, कृपया हल्का इस्पातको छत उपचार गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ वरिपरि काठको सजावट छ भने, तिनीहरूलाई mm०० मिमि भन्दा बढी छुट्याउन आवश्यक छ, र एक्स्बेस्टोसलाई अलग गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
Ch. चिमनी सफाई पेशेवरहरूले गरेको हुनुपर्दछ
फायरप्लेसको फ्रिक्वेन्सी र गहनता अनुसार, फायरप्लेस र चिमनी एक वर्षमा १ देखि २ पटक सफा गर्नुपर्दछ। ती मध्ये फायरप्लेसको भित्री र सतह र गिलास ढोका आफैंले सफा गर्न सक्दछन्, तर चिमनीलाई पेशेवरहरूले सफा गर्नुपर्दछ। किनभने चिमनी सफा गर्न फ्लुको माथिल्लो भागमा जानको लागि छतमा चढ्नु आवश्यक पर्दछ, उत्तम सुरक्षा उपायहरू र पेशेवर अपरेशनहरू गर्नु पर्छ।
F.मानव पूरा गर्ने फायरवुड प्रयोग गर्नु पर्छ
फायरप्लेसमा जलाउने दाउरा पर्याप्त रूपमा सुक्खा हुनुपर्दछ, पानी सामग्री २०% भन्दा कमको साथ। जब सुख्खा दाउरा जलाइन्छ, यसले मात्र पर्याप्त तातो रिलीज गर्न सक्दैन, तर यसले धुवाँ र धुलो पनि उत्पन्न गर्दछ, जसले वातावरणलाई प्रदूषित गर्दछ र सामग्रीलाई खेर फाल्छ, जुन लागत प्रभावी छैन। डेन्सर दाउरा, जलाउन बढी प्रतिरोधी, जस्तै काठ, विविध काठ र यस्तै।
यो ध्यान दिनुपर्दछ कि केहि काठ फायरप्लेसहरू जलाउन सकिदैन। रूखमा तेल भएको दाउराले बल्दा क्रेप तेल उत्पादन गर्दछ, जुन चिमनीको भित्री भित्तामा अडी रहन्छ र सफा गर्न गाह्रो छ। समयको स्ग्रहले आगोको जोखिम बढाउँदछ, जस्तै चिया रूखहरू, साइप्रस रूखहरू, र पीच रूखहरू।
थप रूपमा, रासायनिक रूपमा उपचार गरिएको काठले विषालु ग्याँसहरू जलाउनेछ, जस्तै स्लीपरहरू, प्लाईवुड वा गोंद सहितका अन्य बोर्डहरू। थप रूपमा, यसलाई भट्टीमा फोहोर र प्लास्टिकका सामानहरू जलाउन कडा निषेध गरिएको छ, जसले हावालाई प्रदूषित गर्दछ र भट्टी र चिमनीलाई सजिलै क्षति पुर्‍याउँछ।
अघिल्लो:कसरी3डी atomization फायरप्लेस को गुणवत्ता को न्याय गर्न?